उम्मेदवारी दर्ताका ५ रोचक घटनाः आत्महत्याको प्रयासदेखि डीभी प्रकरणसम्म::KhojOnline.com
उम्मेदवारी दर्ताका ५ रोचक घटनाः आत्महत्याको प्रयासदेखि डीभी प्रकरणसम्म
बैशाख, काठमाडौं । मंगलबार बिहान १० बजेसम्म पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन,उम्मेदवारी मनोनयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय र आशंका थियो । यही आशंकावीच ३ वटा प्रदेशभित्र ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ ।
उम्मेदवारी मनोयनबाट चुनाव सुनिश्चित हुनु आफैंमा एउटा अपत्यारिलो र रोचक विषय भइसकेको थियो । तर, देशैभरि शान्तिपूर्ण ढंगले उम्मेदवारी दर्ता भएकाले चुनावमा जनताको सहभागिता व्यापक हुने देखिएको छ ।
मंगलबार उम्मेदवार मनोयन अघि र पछि केही रोचक त केही दुःखद घटना भए, जसलाई यहाँ बुँदागतरुपमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।
१. हेलिकोप्टर स्टान्टबाइ थियो तर टिकट उड्यो
भरतपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट टिकटको मुख्य दाबेदार थिए-मिलनबाबु श्रेष्ठ । उनको टक्कर थियो रामचन्द्र पौडेल पक्षका टेकप्रसाद गुरुङसँग । टिकट लिन मंगलवार विहानैसम्म उनी काठमाडौंमै थिए । टिकट लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न गाडीमा जाँदा नभ्याउने भएपछि उनले हेलिकोप्टर चार्टर गरेका थिए ।
एकाएक भरतपुर महानगरपालिकाको टिकट कृष्ण सिटौला पक्षका दिनेश कोइरालाले उछिट्याएपछि श्रेष्ठले चार्टर गरेको हेलिकोप्टर लिएर पार्टी सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ भरतपुरतिर लागे । चार्टरको पैसा भने उनले नतिर्ने बताए ।
२. चुनाव गराउनेले नै झण्डै गरे आत्महत्या
रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा चुनाव गराउने जिम्मेवारी थियो निर्वाचन अधिकृत सन्तोष गिरीको । तर, उम्मेदवारी मनोनयनको दिन अर्थात मंगलवार बिहान उनी कालिका गेष्ट हाउसमा खादाको पासो लगाएर झुण्डिएको अवस्थामा भेटिए ।
समयमै उद्दार गर्न सकिएकाले उनलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याई उपचार गराइँदैछ । निर्वाचन अधिकृत सन्तोष गिरीले आत्महत्या प्रयास गर्नुको कारण खुलेकोको छैन ।
३. उपमेयरका उम्मेदवारको नामै भेटिएन
माओवादी केन्द्रले मंगलबार बिहान मात्रै ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा मञ्जली शाक्यलाई उम्मेदवार तय गरेको थियो । माला र खादा लाएर उनी हर्षोल्लासका साथ उम्मेदवारी मनोनयन गर्न निर्वाचन कार्यालयमा गइन् ।
तर, मञ्जलीको खुशी धेरैबेर टिकेन । कर्मचारीले मतदाता नामावलीमा उनको नामै नभेट्टाएपछि खैलाबैला मच्चियो । पम्फा भुसालसहितको टोलीले केहीबेर नामावलीमा मञ्जलीको नाम खोज्यो । तर, भेटिएन । सूचीमा नाम चढाएको भए पो भेटियोस् ।
मतदाता नामावलीमा नाम नभेटिएपछि मञ्जली निराश बनिन् । र, उनका ठाउँमा अर्की हँसिली युवती हसिना शाक्यलाई माओवादीले महानगरको उपमेयरमा उम्मेदवार बनायो ।
४. डीभीले टिकट खोस्योः जागिरले मेयर बन्न दिएन
रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा कांग्रेसले तीन दिनअघि नै युवराज भट्टराईलाई मेयरको उम्मेदवार तोकेको थियो । तर, अन्तिममा उनको अमेरिकन ग्रीनकार्ड रहेको पाइएपछि टिकट रद्द गरियो ।
डीभीवाला पछि हटेपछि मेयर बन्न तम्सिए- मन्थली क्याम्पसका पूर्वप्रमुख गुञ्जबहादुर श्रेष्ठ । कांग्रेस पार्टीले मंगलबार बिहान उनलाई मेयरको उम्मेदवार तोक्यो । तर, उनको पनि मेयरको टिकट ३ घण्टा जतिमात्रै कायम रहृयो ।
श्रेष्ठ क्याम्पस प्रमुखमात्रै नरहेर मन्थली नगरपालिकाको कर्मचारी पदपूर्ति समितिको सदस्यसमेत रहेछन् । लाभको पद भएकाले राजीनामा नदिई उम्मेदवार बन्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था भएकाले राजीनामा स्वीकृत गर्न बोर्ड बैठक बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, बोर्डका पदाधिकारी मन्थलीमा नभएकाले उनको राजनीनामा स्वीकृत हुन पाएन । अन्ततः उनी पनि तीनघण्टे उम्मेदवार बने । अन्ततः कांग्रेसबाट मेयरको टिकट विनोद कार्कीले पाए ।
५. र, महानगरको कुर्सीमा सर्वसाधारणको रहर
उम्मेदवार मनोनयनको दिन काठमाडौं महानगरपालिकामा ठूला दलले आफ्ना उम्मेदवार नै तय गर्न सकेका थिएनन् । तर, साना र नयाँ खुलेका दलका साथै नामै नसुनिएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरु भने कार्यालय खुलेलगत्तै उम्मेदवारी दर्ताका लागि लाइनमा लागिसकेका थिए ।
उनीहरुमा यस्तो उत्साह थियो कि कसले पहिले दर्ता गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । यो प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र उम्मेदवार जनिशा भट्टराई पहिली भइन् ।
काठमाडौं महानगरको उपमेयरमा एक नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकी जोनिशा उनै रसेन्द्र भट्टराईकी छोरी हुन्, जसलाई एक राष्ट्रिय दैनिकले करीब डेढ दशकअघि युरोपकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति भनेर मुख्य समाचार बनाएको थियो ।
बुध, बैशाख २०, २०७४ मा प्रकाशित
३३ किलो सुन तस्करी गोरेले बाबुलाई भेटेर के भने ? अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गोरेको प्रयास!!!
साढे ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरेसँग बिहीबार पनि बयान भएको छ । जिल्ला अदालत मोरङमा करिव ५ घण्टा चलेको बयानमा गोरेले सोधेको प्रश्नभन्दा अनौपचारिक बढी गरेका छन् । बुधबार पनि झण्डै ५ घन्टा बयान भएको थियो । तर, उनले सुन तस्करीको...
जेष्ठ मेला समापन गर्न हेलिकप्टर द्धारा गाँउ जादै अतिथि
शोले युवा कल्ब तमानखोला गाँउपालीका ४ लाम्मेला बाग्लुङ्गले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने जेष्ठ मेलाको समापन ११ गते गरिने भएको छ र उक्त समापन कार्यक्रमा प्रभु बैक कमलादी काठमाण्डौका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन,थकाली सेवा समाज काठमाण्डौ का अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टचन,तारा प्रकाश भट्टचन र निर्गुन भट्टचन...
महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुले यौन व्यवसायमा संलग्न ३४ जनालाई पक्राउ गरे
वैशाख, काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुले यौन व्यवसायमा संलग्न ३४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रभागले शनिबार राति गोंगबु क्षेत्रको दीपज्योति र मित्रनगर आसपासमा गरेको संयुक्त अपरेशनमा खाजा घर सञ्चालनको नाममा यौन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, लागुऔषध बिक्री वितरण गर्ने तथा जुवा खेल्ने ३४ जनालाई नियन्त्रणमा...
जागिर दिने प्रलोभन देखाएर मानिस जम्मा पर्ने र रकम लिएर ठगी गर्ने समूहको धन्दा
१९ फागुन, काभ्रे । बेथानचोक ओमविक्रम लामा रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारीमा थिए । कक्षा १२ मा अध्ययन गर्दागर्दै भारतको गोवा पुगेर वेटर काम गरेका उनी १२ बैशाख २०७२ को भूकम्पपछि नेपाल आएका थिए । घर बनाउने लगायतका काम गरेपछि गोवा होइन, विदेश जाने सोच बनाए...
लक्ष्मीप्रसाद मिश्रको दोस्रो काव्य कृति नशामा डुबेको जीवनको लोकापर्ण
खोज संवाददाता –लमजुङ, सुन्दरबजार महोत्सवको सु–अवसरमा मिठो स्वरका धनी गीतिकाव्य लेखनका बादशाह लक्ष्मीप्रसाद मिश्रको दोस्रो काव्य कृति नशामा डुबेको जीवनको लोकापर्ण प्रदेश नं ४ का मानननिय मुख्य मन्त्री पृथ्बी शुब्बा गुरुङबाट सुसम्पन्न भयो । राष्ट कवि माधव धिमिरेको जन्मथलो लमजुङलाई साहित्यको राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानको...
बन्दकर्ताहरुले मोरङको विराटनगरमा विहानै दुई मालबहाक ट्रकमा अागजनी
फागुन ८, काठमाडौं । अाज नेपाल बन्द गर्ने पुर्व जानकारी हुदाहुदैपनि बन्दकाे अवज्ञा गरेको भन्दै बन्दकर्ताहरुले मोरङको विराटनगरमा विहानै दुई मालबहाक ट्रकमा अागजनी गरेका छन् । मोरङको सलकपुर र ढाटमा आगजनी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अाज अाह्वान गरे‍को नेपाल बन्दले बन्दकाे प्रभाव विहानैबाट देशैभरी...